किन जनावरसँग शारिरीक सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् मानिस ? | Tungoon
काठमाडाैं । बिभिन्न समयमा मानिसले जनावरहरुसंग शारिरक सम्बन्ध राखेको खवरहरु सार्वजनिक भईनै रहेका हुन्छन् । पछिल्लो समयमा मानिषहरुले आफ्नो यौन साथीको बिकल्पको रुपमा अप्राकृतिक साधनहरुको पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन । यस्तै खालको खवरहरु सार्वजनिक भैरहदा सबैमा मानिसहरुले जनावरसँग शारिरक सम्बन्ध किन राख्छन् ? भन्ने पश्न उठ्नु पनि स्वभाविक नै हो ।
समय समयमा पशु तथा जनावरहरुलाई मानिसले करणी गरेको खबरहरु आउने गर्छन् । र पशु अधिकारकर्मीहरुले पशु करणी गर्नेहरुलाई हदै सम्म कार्बाही गर्न माग समेत गर्ने गरेका छन् । पशु करणीको कारण खोज्ने क्रममा थुप्रै विवादहरु पनि आउने गर्छन् । मानिसहरुले पशुसँग सम्बन्ध बनाउनुलाई बेस्टिएलिटी भनिन्छ । ब्रिटेनको एक विश्वबिद्यालयले हालै गरेको एक अनुसन्धान अनुसार यस्ता छन् मानिसहरु जनावरसँग शारिरक सम्बन्ध राख्नुका कारणहरु
मानिसहरु नियमीत पशुसंगको रहनसहनले गर्दा पनि उनिहरु पशुसँग शारिरीका सम्बन्ध राख्न चाहने हुन्छन् । पशुसँग प्रेम खोज्ने उनिहरुलाई मानसिक असन्तुलन भएको भन्ने गरिन्छ ।
२. प्रतिकार गर्न नसक्नु
जनावरहरुले प्रतिकार अथवा बोल्न नसक्नुले पनि पशुसँग मानिसले सम्बन्ध राख्न चाहने हुन्छन् ।
३. मानसिक असन्तुलन
मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिहरु जहिलेपनि पशुको प्रेम मात्र कल्पना गर्ने खालका हुन्छन् । त्यसैले उनिहरु पशु तथा जनावरसंग शारिरक सम्बन्ध राख्ने गर्छन् । केही व्यक्तिहरुमा ह्युमन ऐनियमल रोल प्लेयर्स भएको मानिन्छ । यी व्यक्तिहरुले मौका मिलेको खण्डमा जनावरसँग शारिरक सम्बन्ध राख्ने गर्छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
Previousअब हरेक विद्यालयमा नर्स
Nextरक्सी खाएपछि नेपालीहरू किन अंग्रेजी बोल्छन्, वैज्ञानिक व्याख्या !